Mas'uuliyadda shirkad - MH Thread
Shirkad lagu kalsoon yahay
MH waxaa lagu aqoonsaday Oeko-Tex®Standard100 waxaana lagu sharfay "Shirkadda Top 500 Shirkadda Adeega Shirkadda" iyo "AAA Trustworthy Company".
Ka welwelsan ilaalinta deegaanka
Iyadoo koritaanka Shiinaha iyo dhaqaalaha adduunka, bay'ada dabiiciga ah ayaa sidoo kale sii xumaanaysa. Gaar ahaan hawada, biyaha, iyo wasakheynta badaha ayaa sidoo kale sii kordhaya. MH waxay masuuliyadeeda saaran tahay ilaalinta bay'ada dabiiciga ah.
2015, MH waxay bilowday "hawlaha cagaaran ee" hawlaha badbaadinta deegaanka, iyagoo ugu baaqaya shaqaalaha Mh inay ilaaliyaan xayawaanka dabiiciga ah ayna ku dhaqmaan fikradda ah "cagaarka cagaaran" ee hawlaha dibadda.
MH oo ah shirkad gaar ah oo dharka lagu qalabeeyo, MH waxay ku shaqeynaysay cagaarnta cagaaran ee sanadaha 16, waxayna ku ballanqaadday in ay baaritaan ku sameyso sida loo yareeynayo habka soo saarka soosaarista ee hawada, waxay maal galisay dhisida shaybaar lagu daaweynayo bulaacada, iyada oo hubinaysa in qashin-qubka iyo warshadaynta oo dhan ay buuxiyaan heerarka deegaanka . 2015 MH ayaa sidoo kale bilaabay qashin-qubka, dib-u-warshadaynta dib-u-warshadaynta, polyester-ka beddeli-nadiifinta, iyo Better-Cotton-Initiative, oo ka kooban afarlaha daabacaadda cagaaran ee cagaaran, laga bilaabo alaabta ceeriin si loo barto wax soo saarka cagaaran.
Hay'ad samafal iyo adeeg bulsho
MH waxay sameysay sanduuqa "Xiao dou ya" Fund si ay uga caawiso carruurta tuulada xun inay dhammeeyaan daraasaddooda. MH
ayaa maalgeliyey 7 carruurta saboolka ah muddo toban sano ah.
Xilliga xagaaga, dadka iskaa wax u qabso ku shaqeeya waxay soo diri doonaan hadiyado qaboojin loogu talogalay shaqaalaha nadaafadda iyo booliska gawaarida
MH waxay taageertaa dhaqdhaqaaqa "dharka wareega" waxayna ku deeqday dharka 10,000pcs tuulooyinka saboolka ah ee ku yaal Guizhou, Yunnan
iyo meelaha kale ee saboolka ah.
Sannad kasta, mutadawacyada MH waxay booqan doonaan carruurta Ningbo Enmeier Machadka daryeelka carruurta, oo la ciyaaraya carruurta, iyo u siinaya hadiyado.
MH Qiyaasta Muhiimka ah: Macaamilka Macaamilka, Shaqada Kooxeed, Dib-u-habeyn, Xasiloon, Sharafnimo
MH ayaa aasaasay wargeyska elektarooniga ah ee MH Weekly, MH APP iyo barnaamijyo kale oo isgaarsiineed si loo faafiyo dhaqanka Mh.
MH waxay leedahay dhaqaale gaar ah oo lagu taageerayo dhaqdhaqaaqyada dhaqanka, sida xisbiyada sannadlaha ah, hawlaha kooxda dhismaha, dalxiiska shaqaalaha, iwm. Mh sidoo kale wuxuu leeyahay naadiga kubadda kolayga, naadiga kubada cagta, naadiga dibadda ee naadiyada, naadiga sawirada, iyo kuwa kale, sideed koox, shaqaalaha si ay u helaan qaab nololeed caafimaad leh.
Daryeelka caafimaadka shaqaalaha
MH waxay leedahay kharaj gaar ah oo loogu talagalay caafimaadka shaqaalaha. MH waxay leedahay baadhitaan jidheed sanadlaha ah dhammaan shaqaalaha MH, qabanqaabinta wadahadalka caafimaadka, horudhaca hab nololeed caafimaad iyo aqoonta ilaalinta caafimaadka. Ka sokow, MH waxay sameysay sanduuqa "Firefly" oo ay ka mid yihiin shaqaalaha ka shaqeeya xannuunada waaweyn ama dhibaatada ka soo gaadhay. "Sanduuqa" Firefly "wuxuu ka caawiyay in ka badan toban shaqaale ee sannadkii hore 2.